Otu esi ewepu nje na Mac gị | Ngwa akụkọ
Akụkọ akụrụngwa | 24/03/2022 12:40 | Apple
Dị ka usoro kọmputa ọ bụla, na Sistemu arụmọrụ Apple nwere adịghị ike ya. Ndị nje na-eji ihe ndị a iji nweta kọmputa ma nwee ozi nzuzo, dị ka kaadị kredit ma ọ bụ nkọwa ụlọ akụ. N'ọtụtụ oge, onye ọrụ anaghị amata ọnụnọ nke nje, ebe ọ bụ na ụzọ o si eme omume na-agbachi nkịtị na parasitic.
Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, anyị nwere ozi ọma maka gị: e nwere ọtụtụ ụzọ isi chebe Mac gị. Usoro a kacha mara amara bụ ịwụnye otu antivirus, ọ bụ ezie na e nwere. ọzọ ụzọ wepụ nje si Mac na-enweghị mkpa ịmara n'ime omimi ka koodu ime ya si arụ ọrụ.
1 Kedu ihe bụ nje na gịnị kpatara o ji dị mkpa?
2 Olee otú iji wepụ nje na Mac?
2.1 anya na mgbaàmà
2.2 Wepu ngwanrọ arụnyere
2.3 Nwụnye ngwanrọ nchedo
Kedu ihe bụ nje na gịnị kpatara o ji dị mkpa?
A maara ha dị ka nje kọmputa na mmemme na-ekpuchi ọrụ aghụghọ, dị ka izu ohi njirimara ma ọ bụ mbufe ụlọ akụ. Ya mere, nje bụ sọftụwia nke nrụnye ya na-eche, na-enweghị onye ọrụ maara ya, ohere nke ndị na-enweghị ikike inweta ozi dị na PC.
Ọ bụ ezie na anyị na-ezokarị aka na ha n'otu n'otu, enwere ọtụtụ nje na-adị iche na ha modus operandi. N'ime ihe niile, ndị malware Ndị ohi ma ọ bụ ndị omempụ cyber na-ejikarị ha eme ihe. Ụfọdụ malware a na-ejikarị alụso Mac ọgụ bụ Trojans, ransomware, phishing ma ọ bụ adware. Onye ọ bụla n'ime ha na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche ma nweta data site na ụzọ dị iche iche.
Olee otú iji wepụ nje na Mac?
Ọtụtụ nje na-enweta sistemụ site na ịwụnye ụfọdụ ngwanrọ. Otú ọ dị, e nwere usoro ndị ọzọ nke ndị omempụ cyber na-eji abanye n'ime usoro; ozi, email, malvertising... N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ike ikpochapụ ịnweta malware ma ọ bụrụ na anyị nwere ngwaọrụ ndị dị mkpa.
Nlebara anya na na mgbaàmà
N'ọtụtụ ọnọdụ, nje na-anọgide na-adịghị ahụ anya ma yie ka ọ naghị arụ ọrụ ruo oge ụfọdụ. N'ime usoro a, ndị omempụ cyber na-anakọta ozi nzuzo ma gbalịa ịnweta ngwaọrụ ndị ọzọ ka ịga n'ihu na-arụ ọrụ aghụghọ. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị amaghị na Mac ha bu ọrịa ruo mgbe oge gafere.
Ụfọdụ n'ime mgbaàmà nke Mac nwere ọrịa nwere ike iweta bụ: mfu nke arụmọrụ, ntinye nke ngwa ọhụrụ n'onwe ya, ịdị nwayọọ, nsogbu nchekwa, izipu ozi ịntanetị na ozi n'ọtụtụ mmadụ ... N'ozuzu, omume ọ bụla pụrụ iche kwesịrị ime ka anyị chee na ọnụnọ nke mba ọzọ.
Hichapụ el arụnyere software
Ọ bụrụ na etinyere ngwanro ọjọọ wee hụ ya na sistemụ, Apple na-atụ aro mwepụ mmemme na iziga ya na ahịhịa. Enwere ike ime usoro a site na Ntuziaka Apple.
Ntinye de software nchedo
N'ihi ọdịdị egwu dị na Mac, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyefe ọrụ ha Mac nkwalite na nchedo. Ndị a softwares na-echebe Mac na ọcha na-ewepụ mmemme na ha chere na-enyo enyo. N'otu aka ahụ, ha na-adọ aka ná ntị banyere ịnweta ibe weebụ nke mmalite ha na-akọwaghị dị ka ndị a pụrụ ịdabere na ya, yana ngwa ndị na-enweghị nchebe dị mkpa maka Mac.
N'agbanyeghị nke a, ụfọdụ malware na-ewere ọdịdị nke ngwanrọ nchekwa. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịga na mmemme amara nke nwere ndekọ egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Apple » Otu esi ewepu nje na Mac gị